Unogona Kuva Shamwari yaMwari Zvechokwadi Here? | Swedera Pedyo
3 Jehovha anotikoka kuti tiswedere pedyo naye. Akagadzirira uye anoda kutigamuchira kuti tive shamwari dzake. Panguva imwe chete, anopikira kuti kana tikaswedera pedyo naye, naiye achadarowo. Achaswedera pedyo nesu. Nokudaro tingawana chimwe chinhu chinokosha zvechokwadi—‘ushamwari hwapedyo naJehovha.’ * (Pisarema 25:14, NW) ‘Ushamwari hwapedyo’ hunobudisa pfungwa yokutaurirana zvakavanzika neshamwari inokosha.
12 Jehovha uyo ari mudzimu, akatoita zvakawanda kutibatsira kuti timuzive. Sezvo tiri vanhu tinongoona zvinooneka nemaziso chete saka hatigoni kuona zviri munyika yomudzimu. Kuti Mwari azvirondedzere kwatiri nenzira yomudzimu kungaita sokuedza kutsanangurira mumwe munhu akaberekwa ari bofu chimiro chako, zvakadai soruvara rwemaziso ako kana kuti mavara ari paganda rako. Pane kudaro Jehovha anotibatsira ‘kumuona’ nenzira yatinogona kunzwisisa. Dzimwe nguva anoshandisa mifananidzo, achizvifananidza nezvinhu zvatinoziva. Anotozvirondedzera seane nhengo dzomuviri sevanhu. *
^ ndima 3 Sezvineiwo, shoko rechiHebheru rinoshandurwa kuti ‘ushamwari hwapedyo’ rinoshandiswa pana Amosi 3:7, iyo inoti Changamire Ishe Jehovha anozivisa “zvakavanzika” zvake kuvashumiri vake, achiita kuti vazive pachine nguva zvinangwa zvake zvaachaita.
^ ndima 12 Somuenzaniso, Bhaibheri rinotaura nezvechiso chaMwari, maziso, nzeve, mhino, muromo, maoko, netsoka. (Pisarema 18:15; 27:8; 44:3; Isaya 60:13; Mateu 4:4; 1 Petro 3:12) Mashoko okufananidzira akadaro haafaniri kungotorwa sezvaari, kungofananawo neanotaura nezvaJehovha se“dombo” kana kuti “nhoo.”—Dheuteronomio 32:4; Pisarema 84:11.
Zvakakuomera here kubvuma kuti Mwari ane hanya newe pachako? Mashoko aJesu ari pana Johani 6:44 ane uchapupu hunoratidza kuti Mwari ane hanya nemunhu mumwe nomumwe.